Indlela yokuxelela ukuba i-Element is Metallic ngokufunda i-Table Periodic
Azikho zonke izakhi zensimbi ezilinganayo, kodwa bonke babelana ngeempawu ezithile. Funda oko kuchazwa ngumfanekiso wesinyithi wento kunye nendlela uhlobo lwesinyithi oluguquka ngayo xa uhamba kwixesha okanye phantsi kweqela kwitafile zexesha .
Yintoni Ubunzima Bomculo?
Umgca we-Metallic ligama elinikezelwe kwisethi yemveliso yeekhemikhali ehambelana nezinto ezinesinyithi . Ezi zakhiwo zeekhemikhali zibangelwa ukuba izinto ezinqabileyo zilahlekelwa yi-electron ukuba zenze izication (ions i-charge charge).
Iimpahla eziphathekayo ezihambelana nomnxeba wezinyithi ziquka ukukhanya kwensimbi, ukubonakala okubonakalayo, ubuninzi obuphezulu, ukuqhuba okuphezulu kwe-thermal kunye nokuqhuba okuphezulu kombane. Uninzi lwezinyithi lugxeka kwaye luductile kwaye lunokukhubazeka ngaphandle kokuphula. Nangona ubuninzi bentsimbi bunzima kwaye bunzima, kukho ngokwenene uluhlu olubanzi lwezinto eziphathekayo, nangenxa yezinto ezibhekisiwe njengento enxilisayo.
I-Metallic Character kunye nePeriodic Table Trends
Kukho imizila kwisimo se-metallic njengoko uhamba ngaphantsi nangaphantsi kwetafile. Uhlobo lwe-Metallic luyancipha njengoko uhamba kwixesha elithile kwitheyibhile yenkcazelo ukusuka kwesobunxele kuya kwesokudla. Oku kwenzeka njengama-atom ngokulula ukuba amkele i-electron ukuze agcwalise iigobolence ze-valence kunokulahlekelwa ukuba asuse igobolondo engaphethiyo. Uluhlu lwe-Metallic luyanda njengoko uhamba phantsi kweqela leqela kwitafile zexesha . Oku kubangelwa ukuba i-electrons ilula ukulahleka njengoko i-radius i-radius iyanda , apho kunokukhangeka phakathi kwe-nucleus kunye nee-elektroni ze-valence ngenxa yomgama okhulayo phakathi kwabo.
Ukuqaphela iIt Elements With Character Character
Ungasebenzisa itafile yexesha elifanelekileyo ukuba uqikelele ukuba ingaba isakhi siza kubonakalisa isicatshulwa se-metallic, nokuba awukwazi lutho malunga nalo. Nantsi oku ku funeka ukwazi:
Umgca we-Metallic uboniswa yizinyithi, zonke zikho kwicala lasekhohlo letafile. I-exception yi-hydrogen, engekho phantsi kweemeko eziqhelekileyo. Nokuba i-hydrogen iziphatha njengetsimbi xa ityhile okanye iyomelele, kodwa kufuneka uyiqwalasele into engeyiyo yonke into.
Izinto ezinomfanekiso wecimbi zivela kumaqela athile okanye iikholomu zezinto, kubandakanywa izinyithi ze-alkali, izitye zehlabathi ze-alkali, izitishi zentshintsho (kuquka i-lanthanide kunye ne-actinides ngaphantsi kweqela eliphambili letafile). Ezinye iindidi zesinyithi ziquka iziseko zetsimbi , izitye ezintle, izinyithi eziqingqiweyo, izitropu ezinzima kunye nezitye ezixabisekileyo . I-metalloids ibonisa uhlobo oluthile lwensimbi, kodwa eli qela lezinto linempahla engeyiyo yonke into.
Imizekelo yezinto ezenziwe ngeSimboli seMicrosoft
Iimpawu ezibonisa impawu yazo ziquka:
i-francium (isakhiwo esinomgangatho ophezulu wesinyithi)
i-cesium (inqanaba eliphezulu eliphezulu lomgca wensimbi)
IAlloys kunye neNobumba
Nangona eli gama lisetyenziswe kwizinto ezicocekileyo, ii-alloys zingabonakalisa nomfanekiso wesinyithi. Ngokomzekelo, i-bronze kunye neentlobo ezininzi zethusi, i-magnesium, i-aluminium, kunye ne-titanium zibonakalisa izinga eliphezulu lensimbi. Ezinye i-alloys zensimbi ziquka i-metal, kodwa ezininzi ziqulethe i-metalloids kunye ne-nonmetals, kodwa zigcina izakhiwo zeesinyithi.
Inomic Number 10
Fumana i-10 Iinkcukacha Nge-Sodium Element
Uludwe lweePhepha zeTela zePeriodic
Indlela yokusebenzisa 'i-Periodic Table' kwisivakalisi
I-Copernicium okanye i-Ununbium Facts - Cn okanye i-Element 112
Iinkcukacha zeNobelium - Akukho Element
I-Nickel Element Facts
Uphi i-aluminium efumaneka kwiTable Periodic?
Isikhumbuzo seVeterans yaseVietnam: kwaye uMninimzi u ....
Ngaba Uyazi apho i-Bill Gates kunye ne-90 nezinye izidumi eziya esikolweni?
Umehluko phakathi kwelizwe, uRhulumente kunye neSizwe
Ikholeji ye-Wooster GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Buluc Chabtan: iMean God of War
Ziziphi iimvavanyo ezilawulwayo?
UPlato noAristotle kwiNtsapho: Iimpawu ezikhethiweyo
Iyintoni i-Logo (Symbol)?
Top 10 Carrie Underwood Iingoma
Ukongeza ii-Poker Tournament
Ukuziphatha okuzimeleyo Ukujonga iincwadi zokuhlola
Inkolelo: Abakholelwa kuThixo bayamthiya uThixo kunye namaKristu
Izilwanyana ezingcwele zeBelane iSabbat
Imbali kunye neembali
Udliwano-ndlebe kunye noMani Artist Tite Kubo
Imfazwe YaseMelika: iMfazwe yeNashville
UEgigram, uEgigrafe, noEpitfafa